पुर्वराजकुमारीले भेटेकै हुन् त प्रेमी ? – Sanchar Patrika
July 9, 2020 260
पारसले मदिराको नशामा बबाल गरेपछि तत्कालिन युवराज दीपेन्द्रले ‘बाँधेर ल्याउनु’ भन्ने आदेश दिएका थिए । आदेशानुसार पारसलाई दीपेन्द्र भएको ठाउँमा लैजान खोज्दा ईश्वरले पिटाइ खाए । दरबार हत्याकाण्ड भएकै साल (०५८ असोज) पारस युवराज घोषित भएपछि ईश्वर जागिर छाडेर अमेरिका छिरे । उतै हुँदा नेपालमा रहेकी पत्नी छायाँ चन्द (हालै दिवंगत कलाकार जयनन्द चन्दकी छोरी) रजनिश भक्त विवाहित झापालीसँग गएकी हुन् । पत्नीले छाडेर सेन्ट जेभियर स्कुल पढ्ने दुई छोराको बिजोग भएपछि ईश्वर स्वदेश फर्किएर बनस्थली चोकभित्र घर बनाई सानो ग्रोसरी दुकान खोली बसेका छन् । यिनै ईश्वरलाई गत साता पारसले अस्पतालको प्रांगणमा भेटी हात समातेर छोराको अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । जनआस्थामा समाचार छ !
Prevदाँतको सुरक्षा गर्न ध्यान दिनु पर्ने यी १० कुरा
Nextभोलिदेखि सार्वजनिक यातायात खुल्यो, भाडा ५० प्रतिशत बढ्यो
BREAKING>>कोरोना विरुद्धको खोप बजारमा, कति पर्छ मूल्य ?